Iowa waxay soo qortay 35 kale oo dhimasho ah oo ka timid coronavirus, iyadoo sii wadaysa heerarka sa | KWIT
Iowa waxay soo qortay 35 kale oo dhimasho ah oo ka timid coronavirus, iyadoo sii wadaysa heerarka sa
By Halima Osman • Dec 7, 2020
Somali News 12.07.20
Iowa waxay soo qortay 35 kale oo dhimasho ah oo ka timid coronavirus, iyadoo sii wadaysa heerarka sare ee la xiriira faafida.
Tirada guud ee dhimashada gobolka oo ka badan 2,700 ayaa ah tan 28aad ee ugu sarraysa dalka iyo tan 20aad ee ugu sarraysa qofkiiba.
Saraakiisha caafimaadka ee gobolka ayaa ka warbixiyay Isniinta 912 kiis oo cusub 24-kii saac ee la soo dhaafay.
Khabiirka sare ee cudurada faafa ee ka socda Jaamacada Iowa Hospital iyo Clinics ayaa sheegay in kiisaska ay ku dhaceen Iowa maxaa yeelay iskuuladii ayaa u xirmay Thanksgiving qaar badanna waxay u wareegeen barashada internetka oo kaliya Barta Twitter-ka ayuu ku leeyahay maadama iskuulladu furmayaan iyo kulammada fasaxyada waxaan arki karnaa koror inta lagu jiro bisha soo socota.
Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu diiwaangeliyey 55 kiis oo dheeraad ah oo ah COVID-19 kiis oo ka dhacay Degmada Woodbury wadar ahaan in kabadan 11,000 oo kiis iyo 141 dhimasho ah. Waxaa jira 81 isbitaal dhigis, taas oo ka hooseysa tii usbuucii hore ee sare ee 108. Heerka qummanaanta tijaabada 14-maalmood waa ku dhowaad 19%. Wax kasta oo ka sarreeya 15% waxay muujinayaan heerar sare oo fiditaan bulsheed.
Tirada dadka la seexiyay cudurka coronavirus ee Nebraska ayaa kordhay Axadii markii ugu horeysay tan iyo dhamaadkii bishii hore.
Intii lagu guda jiray shir jaraa'id subaxnimadii maanta, gudoomiyaha gobolka Nebraska Pete Ricketts wuxuu leeyahay xiligan ma ahan waqtigii aan iska ilaalin lahayn ilaaladeena markay tahay COVID-19.
Wuxuu mar kale carabka ku adkeeyay dadka inay iska ilaaliyaan saddexda C: xiriir dhow, meelaha kooban iyo meelaha dadku ku badan yahay.
Dhanka kale, isbitaalada ugu waaweyn South Dakota waxay kujiraan ama ka sareeyaan awoodooda si ay u daryeelaan bukaanada aadka u jiran COVID-19. Hogaamiyaha Argus wuxuu sheegay in qaar ka mid ah bukaanada ugu jiran ee ka imanaya galbeedka gobolka in laga dhoofinayo gobolka si ay u helaan daryeel.
By Halima Osman • Dec 4, 2020
In ka badan 25 boqol oo kiis oo cusub oo ah COVID-19 iyo 85 dhimasho dheeraad ah. Ilaa hadda, Iowa waxay leedahay wadar ahaan 2,603 ​​dhimasho coronavirus. Waxaa jira 1000 qof oo isbitaal la dhigay. Heerka wanaagsan ee 14-ka maalmood ee gobolka oo dhan waa 16.6%.
Dhimashada afar ka mid ah dadka deegaanka Degmada Woodbury oo loo aaneeyo COVID-19 ayaa la soo sheegay maanta, iyo sidoo kale 142 xaaladood oo cusub.
Gudoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa maanta shaaca ka qaaday in gobolka Iowa uu siin doono tal
By Halima Osman • Dec 3, 2020
Gudoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa maanta shaaca ka qaaday in gobolka Iowa uu siin doono talaal isku-dhafan oo 19 ah muwaadiniinta ugu nugul gobolka marka hore.